France ayaa mamnuucday galmoodka markii ugu horeysay tan iyo 1791
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Faransiiska » France ayaa mamnuucday galmoodka markii ugu horeysay tan iyo 1791
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • dhaqanka • Wararka Faransiiska • Wararka Dowladda • Xuquuqda Aadanaha • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Eedaynta, aflagaadada, iyo khaniisnimada ayaa la ciqaabay 1791-kii iyada oo xoogaggii kacaanka Faransiiska ay doonayeen inay meesha ka saaraan anshaxa Masiixiga ah ee udub dhexaad u ah boqortooyada.
Dowladda Faransiiska ayaa ku dhawaaqday inay u dhaqaaqi doonto mamnuucidda xiriirka galmo ee lala yeesho qaraabada dhiigga markii ugu horreysay tan iyo 1791-kii.
Mawduuca ayaa inta badan ahaa mid xaaraan ah France Tobannaan sano ilaa 2021, markii Olivier Duhamel, oo ah falanqeeye siyaasadeed oo caan ah, lagu eedeeyay inuu ku xad-gudbay wiil uu dhalay oo uu dhalay sannadihii 1980-tii.
Duhamel waxa uu qirtay in eedaymahaasi ay run yihiin balse aanu la kulmin wax dacwad ah, maadaama aanay dembi ahayn la-tashigii lala yeeshay qof dhallinyaro ah.
Wareysi dhow, Adrien Taquet, FranceXoghayaha arrimaha dibadda ee carruurta, ayaa sheegay in dowladdu ay mamnuuci doonto galmoodka markii ugu horreysay muddo ka badan 200 oo sano. Xidhiidhka galmoodka ee qaraabadu hadda waa sharci gudaha Faransiiska ilaa carruurtu aanay ku lug lahayn.
Sharciga cusub ayaa keeni doona France waafaqsan inta badan Yurub wadamada mamnuuca xidhiidhka galmoodka ah ee xubnaha qoyska.
Sannadkii hore, dawladda Faransiiska ayaa keentay sharci dembi ka dhigaya in xidhiidh galmo lala yeesho qof qaraabo dhow ah oo da'diisu ka yar tahay 18 jir.
Sharciga cusub ee Faransiisku waxa uu dembi ka dhigayaa in la is guursado xataa haddii labada dhinacba ay ka weyn yihiin 18 jir.
Halka ilma-adeeradu ay weli awoodi karaan inay guursadaan, wasiirku wuu awoodi waayay inuu xaqiijiyo in qoysaska ay adeerka u yihiin lagu daro.
Wasiirka ayaa sheegay in uu taageersan yahay "mamnuucidda cad" taas oo Faransiiska ka dhigi doonta la jaanqaadka inta badan Midowga Yurub quruumaha.
"Da' kasta ha ahaatee, lama samayn galmo aabbahaa, wiilkaaga ama gabadhaada," sarkaalka dawladda Faransiiska ayaa ku adkaystay, isagoo raaciyay "Ma ahan su'aal da'da, ma aha su'aal ku saabsan ogolaanshaha dadka waaweyn. Waxaan la dagaalamaynaa qaraabo kiilka. Calaamaduhu waa inay cad yihiin."